नमस्ते, सबैजना, हामी र तपाईं दुबैको लागि एउटा खुशीको खबर छ, हामीले दुई नयाँ शैलीको आसन सुधारक बनायौं। तपाईंको सन्दर्भको रूपमा चित्रहरू,
पछाडि विश्वास र पछाडि र नुहाउनेहरूको लागि समर्थन पोष्ट करेक्टर - के तपाई घण्टा कम्प्युटरको अगाडि बस्नुहुन्छ वा तपाईको पछाडि र काँधमा असुविधा र घाउ छ? चिन्ता नलिनुहोस्; यसको मतलब पछाडि कोष्ठकले काम गरिरहेको छ र यसले तपाईंको मेरुदण्डलाई यो जस्तो हुनुपर्दछ प al्क्तिबद्ध गर्दै छ! पोष्ट सुधारकर्ताले तपाइँको शरीरलाई समग्र स्पाइन स्वास्थ्य र मुद्रा सुधार गर्न मद्दतको लागि अत्यावश्यक समर्थन प्रदान गर्दछ।
स्वास्थ्य र पोष्ट सुधार गर्नुहोस्: एर्गोनोमिक्स डिजाइनको आधारमा, मुद्रा कोष्ठले तपाइँलाई सिधा पछाडि विकास गर्न र तपाइँको काँध, घाँटी र पछाडि बलियो बनाउन, राम्रो आसन सिर्जना गर्न, घाँटी, काँध, माथिको पछाडि दुखाइ सुधार र खराब बानीहरू बदल्न सक्षम गर्दछ। स्लचिंग। तपाईलाई चोटपटकबाट मुक्त हुन आवश्यक छ वा मुद्रा सुधार गर्न चाहानुहुन्छ, एसआर तपाईलाई मद्दत गर्न यहाँ छ। तपाईंको कशेरुकालाई पुन: प्रमाणित गर्न, तपाईंको मांसपेशीहरूलाई सुदृढ पार्न र गतिशीलता पुनःप्राप्त गर्न मुद्रा सुधारकर्ता पट्टा प्रयोग गर्नुहोस्!
कम्फोरटेबल पोष्टर सुधार ब्रेक: एसआर आसन सुधारक, हल्का वजन, नरम, झरझरा भेंटिलेटिंग सामग्री प्रयोग गर्नुहोस् जसले तपाईंको छालालाई स्वस्थ राख्छ। एक पातलो सास गर्न सकिने सामग्रीले बनेको मुद्रा कोष्ठक जुन कपडाहरू भित्र याद गर्न सक्दैन। हड्डीको कालोले छालामा जलन वा पसिना आउँदैन, घर, काम, वा जिममा लगाउन सकिन्छ।
समायोज्य पोष्ट समर्थन: युनिभर्सल साइज। सुधारकर्ता ब्याक जोडीसँग समायोज्य पट्टिहरू छन् जुन यसलाई किशोर र वयस्कहरू, पुरुष र महिलाहरूमा फिट छ। त्यहाँ "33" - "47" छातीको घेरा फिट हुन्छ। अब जब तपाईंको आसन सुधारिएको छ र तपाईंको पछाडिको मांसपेशीहरू बलियो महसुस भएको छ, तपाईंसँग जानुको लागि अझै एक कदम छ। गतिशीलता पुन: प्राप्ति गर्न र तपाईंको उपचार प्रक्रिया पूर्ण गर्न प्रयोग गर्नुहोस्!
पुरुष र महिला दुबैको लागि पोष्टर करेक्टर किन महत्त्वपूर्ण छ?
हड्डीको काँधको रूपमा कार्य गर्दछ हड्डीको मुद्रा समर्थन प्रदान गर्दा बाहिर काम गर्दा, लिफ्टिंग गर्दा, कम्प्युटर डेस्कमा बसेर, अफिसमा काम गर्ने, आदि।
मेमोरी र सिकाई सुधार गर्दछ र तपाईंलाई अग्लो, स्लिमर र आकर्षक देखिन्छ।
तपाईंलाई आत्मविश्वासवान र शक्तिशाली देखिन्छ र शारीरिक पign्क्तिबद्धता सुधार गर्दछ पछाडि र घाँटी दुखाई र सास फेर्न सुधार गर्दछ।
सजिलै सँगै एक शर्टमा लगाउन सकिन्छ जब काममा छ र तपाइँको लुगा अन्तर्गत पूर्ण रूपमा अदृश्य छ।
हामीले हाम्रो थोरैसिक पेन करेक्टरलाई अपग्रेड गरेका छौँ जसले पिंचिंग र जलनबाट बचाउँछ र काँध पign्क्तिबद्ध प्रदान गर्दछ।
हाम्रो हड्डी फ्रैक्चर कोष्ठक लाइटवेट, सासनीय उच्च-गुणवत्ताको नियोप्रीनबाट बनेको छ।
कसरी आफ्नो पछाडि सुधार गर्न लगाई जारी राख्ने, प्राकृतिक आसन प्राप्त गर्न?
साधारणतया, यसलाई २०--30० मिनेटको लागि लगाएर सुरु गर्नुहोस्, क्रमशः यसलाई लगाउने समय amount-१० मिनेटले विस्तार गर्न सुरू गर्नुहोस्, र दिनमा १ घण्टा सम्म बढ्नुहोस्।
यसैले यसले तपाईंको पोष्टलाई उत्तम बनाउँदछ र त्यसपछि कहिलेकाँही केवल लगाउँदछ।